#Man Utd ayaa soo gudbisay dalab 80 milyan ginni ah oo ay ku dooneyso Harry Maguire - Get Latest News From Horn of Africa
#Man Utd ayaa soo gudbisay dalab 80 milyan ginni ah oo ay ku dooneyso Harry Maguire
By WARIYAHA CAALAMKA On Aug 1, 2019 Last updated Aug 1, 2019
Shabakada “Sport Sports” ayaa xaqiijiyay in Manchester United ay isku diyaarineyso inay dalab qaali ah ay u bandhigto kooxda Leicester City, si ay kala saxiixato daafaca Harry Maguire, kahor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga xagaaga.
26 jirkan reer England ayaa wuxuu haatan bar-tilmaameed buuxa u yahay kooxda Manchester United, si ay ugu xoojisato qeybta daafaca ee Red Devils waqti dheer.
Maamulka Leicester City ma doonayaan inay iibiyaan xiddigooda Harry Maguire, laakiin waxay ka fiirsan doonaan inay iibiyaan haddii ay dhacdo in laga soo gudbiyo dalab ku haboon.
Shabakada “Sport Sports” ayaa intaas ku sii dartay in Manchester United ay isku diyaarineyso inay dalab 80 milyan ginni ah u gudbiso kooxda Leicester City si ay ugu guuleysato adeega Harry Maguire.
Saraakiisha kooxda Man United ayaa sugi doona jawaabta Leicester City kaddib dalabka ay miiska u saareen, hadii kooxda lagu naaneyso dawacooyinka ay ogolaato iibinta Harry Maguire, wuxuu noqon doonaa daafaca ugu qaalisan adduunka.
Daafaca ugu qaalisan adduunka waqtigan waa wiilka reer Holand ee Virgil van Dijk kaasoo ay kooxda Liverpool kula soo wareegtay aduun lacageed dhan 75 milyan ginni.
Yeelkadeeda, qandaraaska Harry Maguire ee kooxda Leicester City ayaa ku eg dhamaadka xagaaga 2023.